के गुणस्तरीय बीउले महामारीको स्थितिमा खाद्यान्न आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षामा मद्दत गर्दछ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS के गुणस्तरीय बीउले महामारीको स्थितिमा खाद्यान्न आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षामा मद्दत गर्दछ?
के गुणस्तरीय बीउले महामारीको स्थितिमा खाद्यान्न आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षामा मद्दत गर्दछ?
बीउ फसल उत्पादनको लागि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रमुख कारक हो। गुणस्तरीय बीउको माध्यमबाट जमिनको उर्वरता कायम राख्दै बालिनालिको उत्पादकत्व बढाउने एक प्रमुख उपाय हो। यो आधारभूत महत्त्वपूर्ण इकाई हो, जुन खाद्य सुरक्षा र जैबिक विविधताको संरक्षणका साथै जीविकोपार्जनको पनि महत्वपूर्ण आधार हो। गुणस्तरको बीउलाई उच्च अंकुरण प्रतिशतको साथ, रोग र रोग जीवहरूबाट मुक्त, र उचित आद्रतायुक्त सामग्री र तौलको साथ शुद्ध रूपमा परिभाषित गरिएको छ। गुणस्तरिय बिउको प्रमुख बिशेषता: विविधताको लागि सत्यता, उच्च अंकुरण प्रतिशत शुद्धता, उच्च जोस, द्रुत उदय र जोडदार वृद्धि हो। गुणस्तरको बीउहरूले यसको उच्च आनुवंशिक र शारीरिक गुणहरूको कारण राम्रो बाली उत्पादनमा सुनिश्चित गर्दछ। गुणस्तरीय बीज बन्न, यो बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्रमाणित बीजको लागि निश्चित मापदण्ड पारित गर्नु पर्छ। प्रमाणित बीज मुख्यतया चार प्रकारका हुन्छन्: न्यूक्लियस बीज, प्रजनकको बीज, फाउंडेशन बीज (I र II) र प्रमाणित बीज (I र II)। यदि त्यस्ता बीउहरू कृषकहरूका लागि उपलब्ध छन्, भने यो उनीहरूको लागि धेरै परिप्रेक्षमा लाभदायक हुन सक्छ जस्तै एकसमान बोट जनसंख्या र परिपक्वता।
खाद्य सुरक्षा र खाद्य आत्मनिर्भरता नेपालमा:
खाद्य सुरक्षा भनेको खानाको उपलब्धता र व्यक्तिको पहुँचको क्षमताको एक उपाय हो। किफायती मात्र एक कारक हो। एफएओका अनुसार, "खाद्य सुरक्षा अवस्थित त्यतिबेला हुन्छ जब सबै व्यक्तिहरूसँग, हरबखत पर्याप्त सुरक्षित र पौष्टिक खानाको लागि शारीरिक र आर्थिक पहुँच हुन्छ जुन उनीहरूको आहार आवश्यकताहरू र सक्रिय र स्वस्थ जीवनको लागि खाद्य प्राथमिकताहरू उनिहरुले पूरा गर्दछन्। नेपाल जनसांख्यिकीय र स्वास्थ्य २०१६ अनुसार नेपालको खाना सुरक्षाले हालका वर्षहरुमा सुधार गरेको छ, नेपालमा ४.६ मिलियन मानिस खाद्यान्न असुरक्षित छन्, २०% घरपरिवार न्युन खाद्यान्न असुरक्षित, २२% मध्यम खाद्यान्न असुरक्षित, र १०% गम्भीर खाद्यान्न असुरक्षित छन्। खाद्य आत्मनिर्भरतालाई आफ्नो उत्पादनबाट उपभोग आवश्यकताहरू किन्न वा आयात गर्नु भन्दा पूरा गर्न सक्षम हुनुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। एफएओ (१९९९) ले विस्तृत सर्तहरूमा परिभाषित गर्दछ, "खाद्य आत्मनिर्भरताको अवधारणालाई सामान्यतया कुन हदसम्म देशले आफ्नो घरेलू उत्पादनबाट खाद्यान्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ भन्ने अर्थमा लिइएको हो।" गुणस्तरीय बीज उत्पादन आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक विकासका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी उपकरण हो। गुणस्तरीय बीजको मूल्याङ्कनको लागि, मुख्य कुरा भनेको शुद्धता, अंकुरण र बीउको धेरै ओसिलोपना हो। यसको लागि, प्रमाणित बीउको अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ, जसमा साँच्चिकै शुद्धता हुन्छ। तराई क्षेत्रमा २% घरपरिवार र हिमाली क्षेत्रमा ११% घर परिवार बीच खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल भएको छ। खाद्यान्न स्व-अपर्याप्त परिवारहरूको करिब २०% घाटा महिनाहरूको लागि खाद्य सुरक्षा संघार आयको न्यूनतम स्तर पूरा गर्न असक्षम छन्। घरेलु खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि खाद्य आत्मनिर्भरताको महत्त्वलाई महसुस गर्दै, यो कागजले विभिन्न क्षेत्रमा खाद्य आत्मनिर्भरताको आंकलन गर्ने प्रयास गर्छ भन्ने बिश्वास छ।
महामारीको स्थितिमा; COVID-१९ महामारीले संसारभरिका सबै प्रणालीमा प्रभाव पारेको छ। यस क्षेत्र मात्र होइन खाद्य सुरक्षा, विश्व खाद्य सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रभावमा परेको छ। नेपालको आवागमन र क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध गरिएको हुनाले देशभर खाद्य सुरक्षाको समस्यालाई बढावा दिन सक्छ। तर COVID-१९ को महामारीलाई कम गर्न र नेपालमा हुने सम्भावित विनाशकारी आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरूलाई कम गर्न महामारी नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिनु पर्छ। भारत नेपालमा खाद्यान्न सामानको ठूलो निर्यातकर्ता हो। भारतबाट आउने तरकारीको आपूर्तिमा अभाव र चामलको निर्यातमा पनि रोक लगाइयेकाले खाद्य सुरक्षाको खाद्यान्न उपलब्धतामा असर पुग्यो। तालाबन्दीको क्रममा, नेपालभर गहुँको फसल कटाई १ अप्रिलमा मात्र ३०-४०% ले सम्पन्न भयो र मेको शुरुवातको रिपोर्टमा ८०-९०% सम्ममा सम्पन्न भयो, तर यातायातको कारण काटिएको गहुँको आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाइयो। ८५% व्यापारीहरूले मालको आपूर्तिमा कमी आएको रिपोर्ट गरे र सङ्सङै ९०% व्यापारीहरूले ढुवानीका लागि ट्रक र अन्य सवारी साधन कम भएको रिपोर्ट गरे। नेपालमा मकैको रोप्ने काम भइरहेको थियो तर मकै बालीमा फल आर्मी गँड्यौलाको आक्रमणले किसानहरूमाथि डर पैदा गरेको थियो। स्थानीयकरण गरिएको असिना र तेज बतासले प्रदेश -१, २, बागमती, गण्डकी, कर्नाली र सुदुरपश्चिमका केही भागमा हिउँदे बाली, तरकारी र फलफूललाई ​​असर गरेको छ।
लम्जुङ कृषि क्याम्पस